नेचा बेतघारीमा तरकारी खेतीको प्रशस्त सम्भावना « Kalakhabar
नेचा बेतघारीमा तरकारी खेतीको प्रशस्त सम्भावना
प्रकाशित मिति : मंगलवार, २६ चैत्र २०७५ १७:५२
कलाखबर संवाददाता,चैत्र,२६,नेचा बेतघारी –सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा सल्यानमा प्रशस्त मात्रामा तरकारी खेतीको सम्भावना देखिएको छ । समुन्द्र सतहदेखि करिब १५ मिटरको उचाईमा रहेको यस क्ष्क्ष्ोमा तरकारी खेतीको लागी उर्वर भुमी रहेको छ । सोलुखुम्बुको मुख्य आम्दानीको स्रोतहरुमा धान,मकै,कोदो, गहँु,फापर आदीलाई लिन सकिन्छ ।
साथै यस क्ष्क्ष्क्षेत्रमा तरकारी खेतीको पनि प्रशस्त मात्रमा सम्भावना रहेको स्थानीय भीम भण्डारीले बताए । एक बर्षदेखि ब्यवसायीक रुपमा भण्डारीले तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ । भण्डारीले बन्दा,काउली,खुर्सानी,प्याज,टमाटर,सागसब्जी जस्ता तरकारी उत्पादन गर्दै आएको छ ।
सरदर बार्षिक रुपमा रामै्र आम्दानी समेत गरि रहेको उहाले बताउनु भयो । जे.टी.ए. अध्ययन गर्दै भर्खरै मात्र आफ्नो ओ.जि.टी. सकाएर बसेका भण्डारीले आफुले प्राप्त गरेका सीप यसै क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने समेत बताए । अब ब्यवसायिक रुपमा नै तरकारी खेती गर्न लागेको बताउनु भयो ।
नेचामा तरकारी खेती बाहेक अन्य फलफूलको पनि धेरै राम्रो सम्भाना रहेको बुबा पुष्प राज भण्डारीले बताउनु भयो । केरा, आँप, सँगै सुन्तला,जुनार निम्बुवा,किवी,कागती जस्ता फलफूलको पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकिने भण्डारीले जानकारी दिनु भयो । नेचाको सल्यानमा बारीबारीमा बाँस खेर गई रहेको छ ।
कसैले पनि आवश्यक टनेला निर्माण गरि तरकारी उत्पादन गरेको छैन । यद्यपी कसैको घरमा एक बोट साग समेत देखिदैन । तरकारी खेतीमा जोड नगर्नुको पछाडी सिचाइँको अभावसँगै कुनै तालिम नलिएको कारण यस विषयमा ज्ञान नभएको सल्यानबासी बताउछन् । स्थनीय स्रोत साधन भए पनि त्यही ज्ञान अभावकै कारण कसैले प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।